एक महीनापछि नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, केके छन् छलफलका मुख्य एजेण्डा ? | suryakhabar.com
Home राजनीति एक महीनापछि नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, केके छन् छलफलका मुख्य एजेण्डा ?
एक महीनापछि नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, केके छन् छलफलका मुख्य एजेण्डा ?
on: ३ मंसिर २०७५, सोमबार १४:४२ In: राजनीतिTags: No Comments
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गत जेठ ३ गते एकता भएपछि तीन महीनाभित्र सकिने भनिएको तल्लो तहको एकता हालसम्म हुन सकेको छैन ।
गोँगबु–लैनचौर सडकमा खम्बा र ठूला बस बने तगारो
३ मंसिर २०७५, सोमबार १४:४२